'Sequía' ndiyo itsva TVE nhepfenyuro ine anozivikanwa maface | Bezzia
'Sequía' ndiyo itsva TVE nhepfenyuro ine anozivikanwa maface
Susana godoy | 01/06/2021 14:00 | Nhau
'Kusanaya kwemvura' yatove chokwadi paTVE. Mune ino kesi, haasi mapuratifomu, atinowanzotaura nezvazvo, ayo anotipa nhau dzinonakidza. Zvinotaridza kuti nzira dzinojairika dzinobhejerawo ngano uye mune iyi ruoko kubva kune vanozivikanwa uye veSpanish vatambi.
Kune izvo zvinoita sekunge ichange iine kugamuchirwa kwakanaka uye pamusoro pazvo zvese, kune nharo yayo yekuti ichave inokanganisa zvisati zvamboitika. Iyo inofadza, saka chakavanzika chichava padivi pedu asi mamwe madingindira achawedzerwa kwazviri eaya atinogara tichida kuwana. Iwe unoda kuziva zvakawanda?
1 Ndeipi zano re 'Kusanaya kwemvura'
2 Nzvimbo dzatichaona mune akateedzana
3 Ndeapi mavara mune akateedzana?
Ndeipi zano re 'Kusanaya kwemvura'
Tinotanga nekuziva zvatichawana mune ino nyowani TVE nhepfenyuro takabatana pamwe nePortugal terevhizheni. Zvakanaka, sezvo isu takafambira mberi, zvinonakidza izvo inotanga nechakavanzika chikuru chisina kugadziriswa mutaundi. Iyi nzvimbo yaona kuti kusanaya kwemvura kwakapinda sei mairi. Asi nekuda kwake kune zvitunha zviviri zvine maronda ekupfurwa izvo zvaive zviriko kwenguva yakareba. Kubva ipapo zvichienda mberi, mapurisa ndivo vanoona nezvekuedza kugadzirisa mhosva iyi.
Kana kuzivikanwa kwevakabatwa kuchizivikanwa, mhuri mbiri dzinoyambuka nzira kunyangwe dzisiri dzenzvimbo imwe chete. Asi izvi zvinomutsa zvakavanzika zvakawanda uye zvisungo zvakavanzika kuti zvioneke. Asi zvakare isu ticha tsvaga kutengesa, rudo uye yakawanda yekuda. Zvakare kutaura, isu tatova nepfupiso yezvose zvichaita 'Kusanaya' imwe yenyaya nyowani dzauchazosungirirwa pairi, zvingangoita. Parizvino, kutora mafirimu kuri kutanga, saka tinofanira kumirira kwenguva yakati rebei.
Nzvimbo dzatichaona mune akateedzana
Zvirokwazvo dzimwe nzvimbo dzekutora mifananidzo dzinozove dzinojairira kwauri, nekuti zvinonzi zvinyorwa zvichatanga munzvimbo dzeCáceres, pamwe neMadrid. Asi sezvatakambotaura kare kuti yaive yekudyidzana pamwe nePutukezi terevhizheni, zvinofanirwa kutaurwa kuti nzvimbo dzeLisbon kana Cascais dzichavawo sepfuti huru, sezvakaratidzwa naVerTele! Nekudaro, kungoziva aya data, isu tinoona kuti inovimbisa zvakawanda, nekuti nzvimbo dzacho zvakare dzine runako rukuru uye izvo zvakawedzera kune nharo zvinogona kutotaura zvakawanda nezvazvo.
Ndeapi mavara mune akateedzana?
Kune rumwe rutivi tinowana Rodolfo Sancho, uyo watinoziva tese nekuda kwekutanga nhevedzano senge 'Al kusiya kirasi' uye kukura mune vamwe vakaita sa'Amar munguva dzinonetsa ',' Isabel 'kana' Hushumiri hwenguva ', pakati pevamwe vazhinji. Padivi pake mutambi Elena Rivera anochengeta mufananidzo takamuona mu 'Servir y Protecte', 'La Chokwadi' kana 'Inés del alma mía'. Miryam Gallego nderimwe remazita arikuwonekerawo pakati pevamiriri veTVE nhepfenyuro. Vaviri 'Vanyori venhau' uye 'Red Eagle' kana 'State zvakavanzika' vaivewo nazvo.
Saka sezvo isu tichiona main cast yakazadzwa nenyeredzi huru, pasina kukanganwa Miguel Angel Munoz kuti isu tinomurangarira kubva 'Nhanho kuenda kumberi' kana iyo 'Ulysses Syndrome', pakati pevamwe. Padivi pake tichaonawo Juan Gea, uyo ane basa refu muterevhizheni uye munyika ye cinema uye kunyangwe mune yemitambo nemabasa mazhinji. Mutambi wechiPutukezi Margarita Marinho uye mutambi Guilherme Filipe ivo vanobatanawo nesimbi. Sezvo firimu rayo parizvino richitanga pakutanga kwezhizha, panguva ino hapasisina dhata pane akateedzana. Asi isu tinovimba kuti munguva pfupi iri kutevera tinokwanisa kunakidzwa nevese vatambi uye maateki pane diki skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » 'Sequía' ndiyo itsva TVE nhepfenyuro ine anozivikanwa maface
Zvakanakira kuruka kwehutano
4 dzimwe nzira dzakatsiga dzekutakura zvinwiwa zvako
Joinha Bezzia mahara uye gamuchira zvese zvirimo mune yako email
Kurima Bindu On
Izvo zvinonyanya kudiwa zvigadzirwa zverunako